Sheekh Shariif “Haddii la rabo in nidaam-ka federaalka laga guuro waa in lagu heshiiyaa” – Kalfadhi
Sheekh Shariif “Haddii la rabo in nidaam-ka federaalka laga guuro waa in lagu heshiiyaa”
October 3, 2019 Hassan Istiila
Madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa si wadajir ah shir jaraa’id ugu qabtay magaalada Muqdisho, waxayna ka hadleen siyaasadda dalka.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka hadlay arrimaha federaaliisamka ee dalka, ayaa sheegay in haddii la doonayo in nidaamkaasi federaalka ah laga guuro waa in lagu heshiiyaa.
“Dowladnimadda hadda socoto, bur-burkii kaddib, dad Soomaaliyeed oo wax-garad ah ayaa isku-tegay, waxaa ay soo qateen nidaam federal ah. Annaga intii aan joogay meesha cidna nama weydiinin, federal ma rabaan mise maya, laakiin, waxaa khasab nagu aheyd in aan raacdo wixii ay Soomaalidda kusoo heshiyeen. Haddii la rabo in nidaam-ka federaalka laga guuro, waa in haddana lagu heshiiyaa”, ayuu yiri Sheekh Shariif.
“Marnaba dalkan dhibaatada ka jirta ka hadalkiiisa ugama hari doono Wiilal yar yar oo masaakiina oo qurbaha jooga ama lamarin habaabiyey ee caaytamaya, annaga waa wadeynaa waxa aan xaqa u leeyahay ayuu yiri” ayuu yiri Sheekh Shariif.
Goorma ayaa la dhammeystirayaa dib-u-eegista Dastuurka?
In kabadan 10 xildhibaan oo Kenyan ah oo suuragal ay tahay in ay lumiyaan kuraastooda